Xeer-ilaaliyaha Gobolka, Guddoomiyaha Maxkamadda iyo Garyaqaan Maxamed Jaamac oo Siyaabo kala duwan uga hadlay Kiiska Boqor Buur-madaw | Berberanews.com
Home WARARKA Xeer-ilaaliyaha Gobolka, Guddoomiyaha Maxkamadda iyo Garyaqaan Maxamed Jaamac oo Siyaabo kala duwan...
Xeer-ilaaliyaha Gobolka, Guddoomiyaha Maxkamadda iyo Garyaqaan Maxamed Jaamac oo Siyaabo kala duwan uga hadlay Kiiska Boqor Buur-madaw
Hargeysa-(Berberanews)- Garyaqaanka u doodaya Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buurmadaw, Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Maroodi-jeex (Hargeysa) iyo Xeer-ilaaliyaha gobolka Hargeysa, ayaa markii ugu horreysay siyaabo kala duwan uga hadlay Xadhigga Boqor Buur-madaw oo markii koowaad shalay si rasmiya loo horgeeyey Maxkamadda, iyada oo haddana aan wax dacwada oo ku saabsan kiiskiisa la dhagaysannin, maxkamaddana aan la horkeenin.
Boqor Cismaan Buur-madaw oo shalay la horgeeyey salaaddii hore Maxkamadda Gobolka, ayaa isla markiiba dib loogu celiyey Xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo uu ku xidhnaa muddo bil ka badan, ka dib markii bilawgii March 2012 Xukuumadda Madaxweyne Axmed-Siilaanyo Xabsiga dhigtay Boqor Cismaan Buur-madaw oo wakhtigaa ka soo degay garoonka diyaaradaha Cigaal ee Hargeysa, isaga oo ka soo duulay magaalada Dubai ee dalka Isu-tagga Imaaraadka Carabta.
Hase-yeeshee, sidaannu ka soo xigannay Wargeyska Ogaal, Boqor Cismaan Buur-madaw oo markii Maxkamadda la keenay loo diiday inay Saxaafaddu aragto waxa dib loogu celiyey Xabsiga. Balse Weriyeyaal ka kala tirsan Wargeyska Ogaal iyo TV-ga Universal, ayaa markaa ka dib sababta Maxkamadda inta loo keenay dacwad la’aan dib loogu celiyey Xabsiga iyo sababta xadhiggiisa ka dambaysa wax ka weydiiyeyeen Xeer-ilaaliyaha gobolka Mr. Yuusuf Sanjeex, Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Cabdirashiid Durraan iyo Garyaqaanka u doodaya Buurmadaw Xildhibaan Maxamed Jaamac. Ugu horreyn Yuusuf San-jeex oo Weriyeyaashu arrintaa wax ka weydiiyeen, ayaa ku dooday in Boqor Buurmadaw dhawr jeer oo hore diiday in la horkeeno Maxkamadda, waxaanu yidhi; “Boolisku waxay war noogu keeneen Boqorkii waxaannu ku nidhi Maxkamadda ayaannu ku geynaynaa, waxa uu yidhi; ‘waan daallanahay illaa shalay waxa ila soo socotay Diyaarad ma tagaayo Maxkamadda halkaygan ayaan ku nasanayaa ee iska kay-daaya waxay ahayd, isla maalintiiba in la keeno Maxkamadda, waayo? Waaranka dacwadda ayaa ka horraysay. Intaas waxa raacsanaa in Guddoomiyaha Maxkamaddu uu ka aq-balay qoraalkii uu u qoray wuxuu yidhi waar iska daaya hadduu sidaa yidhi.”
Xeer-ilaaliyaha gobolka Mr. Sanjeex oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi; “Maalin labaaddii ayaa la damcay in xabsiga lageeyo Maxkamaddana lageeyo tiina waxay yidhaahdeen annagu waxaannu rabnaa in Maxkamadda aanu Boqorkii keenno. Haddaad ijiidaysaan marnaba idin raaci-maayo oo tagimaayo Maxkamadda halkaygaas ayaan fadhiyayaa. Guddoomiyuhu wuxu yidhi Boqor inaanu jiidno oo aanu dhulka jiid jiidno halkaas iyo halkani waa isku midee hadduu diiday in Maxkamadda lakeeno halkiisaaba ku haya waa warkii ay nookeneen kuwii hayey.Waa nin Oday ah inaanu sidii dibjirka aanu jiidno way nagu adkaatay ayey ku yidhaahdeen Guddoomiyaha Maxkamadda. Dabadeedna waxa uu yidhi wakaas waarankii marka uu idinka oggolaado mar hadduu leeyahay Maxkamaddii tagimaayo, markaad maslaxdan ee uu idinka oggolaado ayaad keenaysaan Maxkamadda ee geeya Xabsiga sidaas ayuu markaa labaadna ku baaqsaday.”
“Hadalkii baa batay oo la yidhi Boqorka Maxkamad-ba lama horgayn ee waa lala garab maray, dabadeed Guddoomiyaha Maxkamadda ayaa shalay yidhi anigu cudurdaarka xaggiisa ka yimi ee layga keenay bal ha u shegee soo saara dabadeedna aan qanciyo sababta uu halkaas u tagay iyo sidaannu markii hore ka yeelnay intaas ayaa Maxkamadda loo keenay.” Sidaas ayuu yidhi Xeer-ilaaliyaha Gobalka Hargeysa.
Sidoo kale, waxay Weriyeyaasha UNIVERSAL iyo OGAAL, wax ka weydiinay Guddoomiyaha Maxkamadda Gobolka Hargeysa Cabdirashiid Maxamed Maxamuud (Durraan), dembiga loo haysto Boqor Cismaan Buur-madaw iyo waxa loo keeni waayey Maxkamadda, waxaanu yidhi; “Waxa saaka (shalay subax) Maxkamadda loo keenay waxay ahayd inuu diyaarsado wixii uu isku difaaci lahaa..” hase-yeeshee, Guddoomiyaha Maxkamaddu ka cudurdartay inuu wax faahfaahin ah naga siiyo dembiga loo haysto Boqor Cismaan Buur-madaw.
Geesta kale, Garyaqaanka Difaacaya Boqor Cismaan Aw Maxamuud Buur-madaw Garyaqaana Maxamed Jaamac, oo sidoo kale Ogaal iyo Universal Weriyeyaal ka socdaa wax ka weydiiyeen dembiga Boqorku u xidhan yahay, waxa uu yidhi; “Saaka (shalay subax) waa la soo saaray Boqorka sidaad ka war-haysaan waxa uu xidhan yahay muddo ah bil iyo habeenno, mar keliya Maxkamadda lama horkeenin, waxaanay sharciyan ahayd si loo ogaado qofka xidhan inuu yahay Boqor Cismaan Buur-madow inuu hor-yimaaddo Makamadda oo Garsooruhu uu u arko oo weydiiyo waxa loo haysto yidhaahdana waxaas ayaa laguu haystaa dembigaasna waad ku eedeeysan tahay haddii uu qiranaayo iyo haddaanu qiraneyn-ba iyo hadduu caddayn u hayo iyo hadduu u hayn-ba in la hor-keeno Maxkamadda ayey ahayd.”
Sidoo kale waxa uu Sheegay Garsoorka iyo Booliska inay ka jiraan dhalliilo oo aanay garanayn in ninka xidhan uu yahay Boqor Buur-madow iyo in kale. ”Dhalliil xagga Garsoorka iyo Booliska ka jirta ayey ahayd oo xittaa magaca xidhan inuu yahay magacii Boqor Cismaan dee waxa xidhan magac Maxkamaddu xaqiijiso ayaannu in badan lahayn qolada Xuquuqda Aadamaha in badan ayey ka hadleen sababtaas darteed ayaa Boqorka loo soo saaray Garsoorihii dacwadda hayey u soo saaray una horyimi Maxkamadda.
Dabadeed waxaannu weydiinnay wixii in la keenay oo hadday eed ahayd oo dacwaddii la soo gebogabeeyay, intaasna nasiib-wanaag midna lama keenin oo Garsoorihii waxa uu yidhi haba-yaraatee waxaan ahayn xog aan hadda hayaa ma jiraan oo illaa immika wax dacwad ah oo isoo gaadhay ma jirto.”
“Xeer-ilaalinta lafteedu way timi waxaannu ku nidhi ninkan waxa uu xaq u leeyahay in wixii lagu eedeeyay uu helo oo uu ka jawaabo annaguna aannu ka jawaabno, markaa Xafiiska Xeer-ilaalintu waxay yidhaahdeen; ‘Booliska ayey arrintii ku laalan tahay oo wax gun-gaadha kama hayno eedna noomay soo gudbin.” Sidaas ayuu yidhi Xildhbaan Maxamed Jaamac ahna Garyaqaanka u doodaaya Boqor Cismaan Buur-madaw Garyaqaan Maxamed Jaamac ahna Sharci-yaqaan ka tirsan Xildhibaannada golaha Wakiillada Somaliland.
Garyaqaanka oo la sii weydiiyey inuu Guddoomiyaha Maxkamaddu sheegay in Boqor Buur-madaw waxa lagu haysto ee xadhiggiisa keena laftiisa Maxkamaddu shalay u sheegtay iyo waxa uu Garyaqaan ahaan kala socdo sheegmada Boqorka ee Kiiskiisa, waxa uu yidhi; “Waxyaabaha qofku ku eedeesan yahay waxay ka dhalataa eed baa sheegta illaa haddana eed la keenay Maxkamadda ma jirto. Eedduna waxay noqon doonto qodobbada ay Xambaarsanaan doontaa waxay ku xidhnaan doontaa dembiga la hayo iyo caddaymaha loo hayo illaa hadda mar hadduu Garsooruhu yidhaahdo eeddiiba mahayo dee ma sii darsikaro.
Waxa kale oo Garyaqaan Maxamed Jaamac la weydiiyey Su’aal ahayd; Guddoomiyaha Maxkamada iyo xeer ilaaliyaha Gobalku waxay noo shegeen in laba jeer oo hore Maalintii laqabanayey iyo Maalin ka danbaysayba in Boqorku uu diiday in Maxkamadda la geeeyo, diidmadaasi soo may jirin? Waxaanu ku jawaabay; “Maya.. Ma jirto. Boqorku waxa uu noo sheegay saakana (Shalay) Maxkamadda horteeda ka sheegay markuu Garsooruhu weydiiyey arrintaas aniga maalintii koowaad oo aan daallanaa oo aan xannuunsanayey mooyee may jirin inaan diiday hortagista Maxkamadda.
Xannuunno ayuu leeyahay Boqorku Dhiig-kar iyo Macaan, maalintaas oo xaaladdaydu kacsanayd ayaan idhi buu yidhi; ‘waar aan nasto, maalin danbe lama odhan Maxkamadda ha lagu geeyo oo hadduu diiddan yahay maantana wuu diidil ahaa maalintii laga soo wareejinayey Xarunta C.I.D-da ee la keenayey Xabsiga dhexe ayuu diidi lahaa. Markaa, waxaan leeyahay ma dhici karto, waa nin dhaqan oo Boqor ah, suuragalna maaha inuu diido amarka Maxkamadda ama amarka Booliska oo Booliska ayaa si caadiya u amra oo yidhaahda halkan fadhiiso, halkan ka kac, markaas waxaan leeyahay taasi may dhicin.”
Previous articleMagacyada Masuuliyiinta loo doortay Hoggaanka Urur-siyaasadeedka WADANI iyo Shirweynihiisii oo maanta soo xidhmay
Next articlePuntland oo Shaaciyey inay Al-Shabaab u soo qaxayso Buuralayda Golis iyo Qorshaha uga yaalla